Flam Ny Myrdal, Norvezy: Summer Stop Iray Tsara Tarehy | Save A Train
Home > Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina > Flam Ny Myrdal, Norvezy: Summer Stop Iray Tsara Tarehy
Fotoana famakiana: 3 minitra(Last Nohavaozina: 04/02/2020)
Ny lalamby Flam tsipika avy Flam ho Myrdal Voalaza fa iray amin'ireo tsara indrindra nandehanany fiaran-dalamby eto amin'izao tontolo izao ary afaka mahatakatra ny antony. Ny dia ihany no maka ny adiny iray ny toerana manodidina fa tena fofonaina-ilainy. Tandremo sao tsy mahita izany zava-nitranga, rehefa nitsidika an'i Norvezy. Ao amin'ny ora diany, ny fiaran-dalamby mitondra mpandeha avy amin'ny Sognefjord in Flam izay eo amin'ny haavon'ny ranomasina, ho any an-tendrombohitra ny Myrdal fiantsonan'ny izay any 867 metatra ambonin'ny ranomasina. Izany no iray amin'ireo faneva-mideza habetsahan'ny lalamby andalana eto amin'izao tontolo izao. Ny lalamby naka tsipika 20 taona vao vita. Ny Nandika vilana tonelina izay mihazakazaka eo amin'ny tany ary tao an-tendrombohitra seho eny sahisahy indrindra, ary injeniera mahay tantara fa norvejiana lalamby mbola nahita. Flam ny Myrdal, Norvezy: Iray Tsara Tarehy Summer Stop dia lavitra tokoa ny androm-piainany.
Mitaingina ny Flam Railway
Dia nandray ny fiaran-dalamby avy any Flam ho Myrdal dia hitondra anao amin'ny alalan'ny 20 tonelina, 18 ny izay nanorina ny tanana, ary mijanona amin'ny tanàna maro tahaka ny bibilava ny fomba ny Flam Valley. Ny fiaran-dalamby manome mpandeha iray Panoramika fijery fa izahao toetra sy hahazo seza akaikin'ny varavarankely ho an'ny Tazana tsara indrindra sy ireo afaka manokatra in Summer ho fanampiny traikefa manokana. Myrdal-peo dia avo ho eny an-tendrombohitra ary ahitana na inona na inona, fa miandry ny mpijery, tapakila desk, ary ny Cafe kely. Afaka mitaingina ny fiaran-dalamby, ka nidina ny tendrombohitra.
Flam ny Myrdal in Summer
Summer tonga lafatra fotoana mba haka ny fiaran-dalamby avy any Flam ho Myrdal. Ny toetr'andro sy ny zava-drehetra dia mafana Maitso! Eritrereto nanakodia ny vato krystaly-havoana sy mazava rano amin'ny zavamaniry tsara tarehy sy voninkazo mamelana manontolo. Misy ihany koa ny tongotra lavitra lalana na ny sy Flam sy Myrdal. Midika izany fa afaka hahazo ny fiaran-dalamby ho any Myrdal ary avy eo tongotra indray izy ka mankafy ny masoandro.
Raha misy zavatra iray tsy maintsy atao, rehefa nitsidika an'i Norvezy, ny lalamby fiaran-dalamby avy any Flam ho Myrdal no. Izy io dia tsara tarehy nijanona Summer. Ny fiaran-dalamby mitantana taona rehetra manodidina amin'ny niakatra ho any 10 ny fiaingana isan'andro in Summer. Purchase tapakila an-toerana any Norvezy na oviana na nisian'ny gara, na amin'ny fiantsoana ny antso NSB foibe. Izy ireo amin'izao fotoana izao tsy misy an-tserasera. Aza adino ny mahazo ny tapakila ho an'ny fiaran-dalamby io ianao raha vao tonga any Norvezy mba tsy fahadisoam-panantenana sy ny traikefa ny androm-piainany!
Isika dia fanatitra Eoropa fiaran-dalamby tapakila, fotsiny ho any amin'ny Save A Train vohikala sy mankafy ny mitaingina.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fflam-to-myrdal-norway%2F%3Flang%3Dmg- (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#flam #Myrdal #fahavaratra travelnorway